YEYINTNGE(CANADA): Thursday, April 11
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/11/20130အကြံပြုခြင်း
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ မီးရို့ တာ ရိုးရိုးမဟုတ်
ဧပြီလ-၉-ရက်-၂၀၁၃-ခုနှစ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကို ခြေဆေးတဲ့ နေ့ ဖြစ်သွားတယ် ။ ရန်ကုန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မူဆလင်ဘာသာရေးအဖွဲ့ -၄-ခုက သွားရောက်တွေ့ ဆုံတယ် ။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မှာ ကုလားတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါ ပိုစတာတွေကို မီးရို့ တယ် ။ ကနေဒါက အောင်တင်က မိုးသီးဇွန်ဘလော့မှာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမကို ဆွမ်းဘုဉ်းဘယ်လောက် စားသလဲ ဆိုပြီး အပုပ်ချ ရေးတင်တယ် ။ ဒါဟာ တနေ့ ထဲ တကြိမ်ထဲ တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ် ။ သာမန်တိုက်ဆိုင်မှုတွေ မဟုတ်ဘူး ။ ကြိုတင်စီစဉ်မှုတွေ ဖြစ်နေတယ် ။
တချိန်ကမြန်မာသံရုံးတွေမှာ ဆန္ဒပြကြပြီဆိုရင်ဖြင့် ၀ပ်ဆိုဒ်တွေ ဘလော့တွေမှာ တခန်းတနား ဖေါ်ပြလိုက်ကြတဲ့ပုံတွေဟာ မမြင်ချင်အဆုံးဖြစ်တယ် ။ ခုတော့ ရှာကြည့် ၊ ဘယ်မှာမှ မတွေ့မမြင် ။ ထူးခြားတယ်လို့ပြောရမလား ။ ဧရာဝတီမှာ ဖေါ်ပြထားတယ် ။ ဒါပေမဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို မီးရို့ တာနဲ့ပါတ်သက်လို့ဖေါ်ပြတာမဟုတ်ဘူး ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံတ၀န်း တနံတလျားမှာရှိတဲ့ဘယ်အတိုက်အခံကိုမှ မေးစမ်းအင်တာဗျူးတာ မဟုတ်ဘဲ ကုလားကျော်နု ကို အင်တာဗျူးတာ ဖေါ်ပြထားတယ် ။ ဒီတော့ သူတို့ ဘဲ လုပ်ပြီး သူတို့ ဘဲ ပြောချင်ရာ ပြောတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတင်တာဘဲ ဖြစ်တယ် ။
ဒါတွေဟာ အစီအစဉ်တကျ အကွက်ဆင်ဖန်တီးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ် ။ အဓိကကတော့ သူတို့ ရဲ့သမိုင်းလိမ်နာမည်ကို ကမ္ဘာက သိသွားချင်နေတာကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ကစားပြတာဖြစ်တယ် ။ သူတည်းတယောက် ကောင်းဖို့ ရောက်မူ -သူတယောက်မှာ-ပျက်လင့်ကာသာ-ဓမ္မတာတည်း ဆိုသလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကောင်းစေဖို့ အတွက် သေရွာပါသည့်တိုင်အောင် ပျက်စီးခံနေရပြီ ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတယ် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ အရည်အချင်း သုံးခုရှိတယ် ။ ပထမအရည်အချင်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း လွပ်လွပ်ရေးဖခင်ကြီးဆိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ အရည်အချင်း ၊ ဒုတိယအရည်အချင်းက ပညာရည်ထူးချွန်တဲ့အရည်အချင်းနဲ့တတိယအရည်အချင်းက ရုပ်ရည်ချောမွေ့လှပခြင်း ဆိုတဲ့အရည်အချင်းသုံးမျိုး ရှိနေလို့ဖြစ်တယ် ။
ခုတော့ ကောင်းကင်မေမေဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အသည်းလှိုက်အူလှိုက် ချစ်ခင်မြတ်နိုး လေးစားရတဲ့ဒို့ ဗိုလ်ချုပ်ဓါတ်ပုံကိုမှ သမိုင်းလိမ်ဘင်္ဂလီမူဆလင်ကုလားတွေက လူမြင်ကွင်းမှာ သိက္ခာချ စော်ကားလိုက်ပြီ ။ ဒီလို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို မီးရို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ပါတ်သက်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြ အကောင်းဆုံး ထုတ်ဖေါ်ပြောသူဟာ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အ၀ိုင်းအ၀န်းက မှူးဇေါ်ဆိုသူသာဖြစ်တယ် ။ ဒိပြင် ဘယ် ကကြီးကခွေး ကျောင်းသား- ဘယ်မူလတန်းကျောင်းသား- ဘယ်အလယ်တန်းကျောင်းသား- ဘယ်အထက်တန်း ကျောင်းသား- ဘယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့ အစည်းတွေ-ဘယ်မျိုးဆက်တွေကမှ မပြောကြသလို ဘယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ အစည်းကလဲ မပြောကြတာ ရင်နာနာနဲ့ကြည့်နေကြရတယ် ။
အထူးသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ကလဲဘဲ ဒါကို တနည်းနည်းနဲ့ထုတ်ဖေါ်ကန့် ကွက်လေမလား စောင့်ကြည့်မိပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ဘဲ မျက်စိလျှံနေတာလား-ဒါမှမဟုတ် ကန့် ကွက်တာကိုများ မတွေ့ မမြင်သလား မပြောတတ်ဘူး- ခုထိ ကျွန်တော် မတွေ့ မမြင်သေးတာကိုတော့ ပြောရပါလိမ့်မယ် ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်အနေဖြင့် ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ခွင့်လွှတ်လို့ရတယ်လို့လူ့ အခွင့်အရေးပဋိဥာည်စာတမ်းကို ကိုးကားပြီး ပြောလို့ ရပေမဲ့ခုတချိန်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကို မီးရို့ တာကိုတော့ ပြောသင့်ကြေညာသင့်ပါတယ် ။ ဒါမျိုးကို ကန့် ကွက်ရမယ် ။ ဒီလိုကြေညာရမယ်ဆိုတာဟာ သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထိခိုက်သိက္ခာကျသွားအောင် လုပ်တာမျိုးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖခင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သိက္ခာကျအောင် လုပ်တာကို မကြေနပ်လို့ကြေညာသည်ထက် အဓိက ဖြစ်စေရမှာက မြန်မာနိုင်ငံလွပ်လွပ်ရေး ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သိက္ခာချ စော်ကားလွန်းတဲ့ အတွက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်စေရပါမယ် ။ လုံးဝခွင့်လွှတ်၍ မရသော အခုလိုအပြုအမူမျိုးဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ကြီးမားသောနောင်တမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်လို့ လဲ သင်္ခဏ်းစာခုအဖြစ် သတိထားရမည့် မှတ်ထားရမည့်အချက်အလက် ဖြစ်ပါတယ် ။
ခုအချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွပ်လွပ်ရေးမျိုးစေ့ချသူ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမကို ရော လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပါ သိက္ခာချ စော်ကား လာတာဟာ စစ်ဆင်ရေးဗျူဟာ တခုကို ဖေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ် ။ တချိန်မှာ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့လုံခြုံရေးအရ အထူးသတိ ထားရတော့မဲ့အချိန်အခါ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ပြီဖြစ်တယ် ။ ကျွန်တော်တို့သတိပေးတာကို မယုံကြည်ဘဲ အရင်ကလို ဖက်လှဲတကင်း ဆက်ဆံနေမိရင်တော့ တနေ့ မှာ ဖြေဆည်လို့ မရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးကို ကြုံသွားနိုင်တယ် ။ ပြန်လည်အစားထိုးမရတော့တဲ့နောင်တ-တဖန်မျိုးကို ဘယ်လိုမှမဖြစ်စေချင်တဲ့ အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့သွားသတိ နေသတိ-စားသတိ-အိပ်သတိနဲ့အစစအရာရာ ဆင်ခြင်ထားဖို့ လိုပါတယ် ။
အခုအချိန်မှာ ဘယ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လုံးဝဥသုံတိကျစွာ ပြောရဲပါတယ် ။ တကယ်လုပ်ကြံ လည်လှီးသတ်ဖြတ် ပစ်ခတ်မှာက အခုလို ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆန္ဒပြမီးရို့တဲ့လူမျိုးတွေ ဆိုတာ နားလည်ထားဖို့ လိုတယ် ။ နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်သူ့ ကိုမဆို မယုံကြည်ကောင်းဘူးဆိုတာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဖို့သင်္ခဏ်းစာ တပုံတခေါင်းရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာကလေးစားချစ်ခင်တဲ့နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ မျက်မှောက်လောကမှာ ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လွယ်လွယ်နဲ့ဆုံးရုံးမခံနိုင်သလို ပျက်စီးမခံနိုင်တာလဲ အမှန်ဘဲဖြစ်တယ် ။
တကယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပုပ်ချ စော်ကားချင်တဲ့သမိုင်းလိမ်ကုလားတွေဟာ လူ့ အခွင့်အရေးကို ဗန်းပြလို့မီးရို့ဆန္ဒပြကြရင်တောင်မှ ပြလို့ ရနေသားပါဘဲ ။ ခုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓါတ်ပုံကိုပါ စော်စော်ကားကား ကျူးလွန်ပြရဲတဲ့သတ္တိတွေနဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တာဟာ မြန်မာ့သမိုင်းကို ခြေဆေးတဲ့ နေ့ အဖြစ် ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တယ် ။ ဒီလိုကြေညာခြင်းမျိုးကို ကျွန်တော်တို့ ရင်နာခွင့်ရှိနေရပါလိမ့်မယ် ။ ရင်နာခွင့်လဲ ဖြစ်သင့်ရပါမယ် ။ သီပေါမင်းပါတော်မူခဲ့ တဲ့နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ သူ့ ကျွန်ဘ၀ ကိုလိုနီ ရောက်ခဲ့တဲ့ အတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို လွပ်လွပ်ရေးရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ တဲ့အမျိုးသားဖခင်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ် ။ ခုတော့ ဒီလိုအမျိုးသားဖခင်ကြီး တဦးကို နိုင်ငံတကာရှေ့မှာ မီးရို့ ဆန္ဒပြစိန်ခေါ်လိုက်တာဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ မှ ခွင့်လွှတ်၍ ရစေနိုင်သော အချက်အလက် တခုမဟုတ်သလို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအဖို့ရင်နာခွင့်ဖြစ်ပေါ်ခံစားရရှိစေမဲ့နေ့ ရက်တရက်ဖြစ်တယ် ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/11/20132အကြံပြုခြင်း
တန်ဖိုးနည်းဆင်းကဒ်များကို ၂၄ရက် တွင် အမည် မှတ်ပုံတင် သန်းခေါင် စာရင်း တို့့ဖြင့် ရပ်ကွက်ရုံး သို့ လျှေက်တင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မဲစနစ်ဖြင့် ရောင်းချ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရ ပါသည်။ ခွဲတမ်း အ ရေတွက်စုစုပေါင်း ကိုမသိရှိပါ။
by lutit lay
( mail သို့ပို့လာလို့ဖေါ်ပြပေးပါတယ်)
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ငှက်တုပ်ကွေး ရောဂါကြောင့် နောက်ထပ် လူတဦး သေဆုံး သွားခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် အိမ်နီးချင်း တိုင်းပြည်တွေကို ပျံ့နှံ့မှာစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) ကပြောလိုက်ပါတယ်။ H7N9 ဗိုင်းရပ်ကြောင့် ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ နောက်ထပ် လူတဦး သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့အတွက် စုစုပေါင်း ငှက်တုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်းဟာ အခုအခါ ၁၀ ယောက်အထိ ရှိနေပြီဖြစ် သလို၊ နောက်ထပ် ရောဂါ ကူးစက်မှု တွေ့ရှိထားသူ ၃၈ ယောက်အထိ ရှိနေတာပါ။
လတ်တလော ရောဂါ ကူးစက်မှုတွေဟာ တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းမှာသာ ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လည်း နယ်စပ်ချင်း ထိစပ်နေတဲ့ မြန်မာ၊ လာအိုနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွေကို ပျံ့နှံ့မှု မရှိအောင် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေ တယ်လို့ FAO တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆို လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေကတော့ ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ပျံ့နှံ့နေပြီ လို့ ကောလဟလတွေ ဖြန့်ချီတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက် နဲ့ လူအတော်များများ ကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားတာပါ။ ကျန်းမာရေး အရာရှိတွေကတော့ ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်မှုတွေ တွေ့ရှိရတဲ့ ရှန်ဟိုင်းမြို့ရဲ့ မြစ်တွေထဲမှာ မကြာသေးခင်တုန်းက ၀က်အသေကောင် ထောင်ပေါင်းများစွာ မျောပါနေခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေဟာ ဆက်နွယ်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
H7N9 ဗိုင်းရပ်ပိုးဟာ လူလူချင်း ကူးစက်နိုင်တဲ့ အန္တာရာယ် မရှိပေမဲ့လည်း တိရစ္ဆာန်ကတဆင့် ကူးစက်ခံရတဲ့ လူတွေမှာတော့ ရောဂါပြင်းထန်လေ့ ရှိတတ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင်း ကြက်ဌက်တုတ်ကွေး ရောဂါပိုး စစ်ဆေးနေစဉ်။
မှတ်သားဖွယ်ရာ ရုရှက ပူတင်ရဲ့ စိန်ခေါ်သံစကား
Russian သမ္မတ Putin ပါလီမန်မှာ ပြောတဲ့ စကား
"ရုရှ မှာ ရုရှန် တွေ နေတယ်။ ဘယ်နေရာ က လာတဲ့ လူနည်းစု မဆို ရုရှမှာ နေလိုရင်၊ အလုပ်လုပ်ပြီး နေထိုင်စားသောက်လိုရင်၊ ရုရှ စကားပြောသင့်တယ်၊ ရုရှ ဥပဒေကို လိုက်နာသင့်တယ်။
သူတို့ အနေနဲ့ ရှာရီးယား (အစ္စလာမ် ဘာသာရေးဥပဒေ) ကို ပိုကြိုက်ရင်၊ အဲ့ဒီဥပဒေ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို သွားနေပါလို့ ကျွန်တော်တို့ အကြံပြုချင်တယ်။ ရုရှ ဟာ လူနည်းစုကို မလိုဘူး၊ လူနည်းစုက သာ ရုရှကိုလိုတယ်။ သူတို့ အနေနဲ့ လူမျိုးရေးခွဲခြားပါတယ်လို့ ဘယ်လိုပဲ အသံကျယ်နဲ့ ဟစ်နေပါစေ သူတို့ ကို အထူး အခွင့်အရေး မပေးနိုင်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ လိုလားချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြင်ဖို့ ကြိုးစားမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံ တစ်ခု အနေနဲ့ ဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်ဖို့ဆိုရင်၊ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ဟော်လန်၊ ပြင်သစ် တို့ရဲ့ ကိုယ့် သေတွင်း ကိုယ်တူး တဲ့ သာဓက တွေကို သင်ခန်းစာ ယူ သင့်တယ်။
ရုရှ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့တွေကို လူနည်းစုတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ကင်းမဲ့ တဲ့ စရိုက်တွေ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ ဦး အစကလို နေထိုင်မှုမျိုးတွေနဲ့ ယှဉ်လို့ မရပါဘူး။ ယခု ဂုဏ်သိက္ခာရှိ ဥပဒေပြု အဖွဲ့ အစည်း အနေနဲ့ ဥပဒေ အသစ်တွေကို ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်၊ အမျိုးသား ရေးကို ပထမဆုံး ခေါင်းထဲ ထဲ့ထားရမယ်၊ လူနည်းစုဆိုတာ ရုရှန်တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကို သတိချပ်ရမယ်။ "
[Photo Source : http://humas.polri.go.id/PressReleases/Pages/KRONOLOGIS-PENGANIAYAAN-SECARA-BERSAMA---SAMA-YANG-MENGAKIBATKAN-8-WARGA-MYANMAR-%28PELAKU-ILLEGAL-FISHING%29-MENINGGAL-DUNIA.aspx]
Credit to ရာဇာဓိ ရာဇာ
တရားရုံးအတွင်း လမ်းပေ့ါ်တွင် ကိုမြင့်စိုးက တစ်နာရီခွဲတိတိ ထိုင်သပိတ်ပြုလုပ်
San Min's photo.
ကိုမြင့်စိုးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန် ပေးထားသော ဖုံးနံပါတ်အမှန်မှာ- ၀၉၄၄၈၅၃၅၉၈၄ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုမြင့်စိုးကို ထောင်ဒဏ် ခုနှစ်နှစ်နှင့် ခြောက်လ ချမှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ အမိန့်ချပြီးနောက် ကျိုက်ထိုမြို့နယ် တရားရုံးအတွင်း လမ်းပေ့ါ်တွင် ကိုမြင့်စိုးက တစ်နာရီခွဲတိတိ ထိုင်သပိတ်ပြုလုပ်နေရာ ကိုမြင့်စိုးအား လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အင်အား ၁၈ ယောက်ခန့်ကအတင်းအကြပ် ဆွဲခေါ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။ ၎င်း၏တောင်း...ဆိုချက်မှာ မတရားသဖြင့် တရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးခံရမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တိုင်းပြည်မှာ ဥပဒေမရှိဘူးဆိုတာကို ဒါနဲ့ လက်တွေ့သက်သေပြတာပဲ၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများက ဝိုင်းဝန်း ဖော်ထုတ်ပေးပါ ဟု ကိုမြင့်စိုးက ပြောဆိုပါသည်။ ယခုတရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးခံရမှုကို လာရောက်စောင့်ကြည့် နားထောင်သူ ပြည်သူလူထုအင်အား ၃၀၀ ကျော်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
လေဘာကိုမြင့်စိုးသည် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကာလတွင် အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားသွေးစည်းညီညွတ်ရေးအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် လက်နက်ကိုင်ဒေသဖြစ်သော သေဘောဘိုးဒေသသို့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲရန်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၊ မြေပေါ်တိုက်ပွဲလိုအပ်ချက်အရ ရန်ကုန် ယူဂျီလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဗကသ၊ အကသ၊ ရကသ အဖွဲ့များဖြင့် ပူးပေါင်း၍ တပ်ပေါင်းစုလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ရင်း ၁၉၉၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ၎င်းပုံးအောင်းနေထိုင်ရာ မင်္ဂလာဒုံ ကြံခင်းစုရပ်ကွက်တွင်း အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး ပုဒ်မ-၁၇(၁)၊(၂) ၅(ည) များဖြင့် အထူးတရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အင်းစိန်ထောင်၊ သာယာဝတီ အကျဥ်းထောင်တို့တွင် ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီး သာယာဝတီထောင်တွင် ထောင်တွင်းလှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ပြစ်ဒဏ်တစ်နှစ် ထပ်မံတိုးမြှင့် ခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၁၃ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါသည်။ ထောင်မှ လွတ်မြောက်ပြီးနောက် အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စများနှင့် အဖိနှိပ်ခံပြည်သူများဘက်မှ ရပ်တည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရင်း ယခုကဲ့သို့ စစ်တပိုင်း ကြံဖွတ်အစိုးရ၏ မတရား တရားစွဲဆို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်
နယူးဝိန့်စိန် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် သုံးဦး ထောင်ဒဏ် 14 နှစ်အမိန့်ချမှတ်
အမှု အခင်းတွေကို တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်က ကျောသား ရင်သား မခွဲခြားပဲ စစ်ဆေး စီရ့င်နေတာ တွေ့ရလို့ ဂုဏ်ပြု ကြိုဆိုတဲ့ အနေနဲ့ ဒီနေ့ ကျနော့် ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်စဉ် တချို့ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
ယနေ့ မနက် ၁၀ နာရီခန့်က ပန်းဆိုးတန်း မှတ်တိုင်နားက မြန်မာ့အလှ ကင်မရာဆိုင်မှာ ကျနော် ကင်မရာ ပျက်စီးလို့ ပြင်ထားတာကို သွားရွေးတုန်း ဆိုင်ရှေ့ လူသွား ပလက်ဖေါင်းပေါ် မှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရတယ်။ အိန္ဒိယလူမျိုး သားအဖ ( ဘာဘူကြီးက ၆၀ ခန့် နဲ့ သူ့သမီးက ၂၀ ခန့်) နှစ်ယောက်က မြန်မာမိန်းကလေး ( အသက် ၂၀ခန့်) ကို အတင်းဆွဲလား လွဲလားနဲ့ ဆံပင်ကို ဆွဲသူက ဆွဲ အဘိုးကြီးက လက်မောင်းကို အတင်းဆွဲ နဲ့ ၊ အဲဒီအချိန်မှာ မြန်မာ ကောင်လေးတယောက် ( အသက် ၂၀) ခန့်က လည်း မြန်မာမိန်းကလေးကို ၀င်ဆွဲ ။ အတော်ကို ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်နေပါတယ်။ အဆွဲခံရတဲ့ မိန်းကလေးကလည်း အတင်းအော် ရုန်းထွက်၊ ဘယ်လိုမှ ကြည့်မကောင်းတာနဲ့ ကင်မရာဆိုင်ထဲက ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ပြေးထွက်ပြီး လူအုပ်တွေ ၀ိုင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ အဲဒီလေးယောက်ကို ၀င်မေး ဖြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။
၆၀ လောက် ဘာဘူကြီးက အသက် ၂၀ လောက် မြန်မာမလေးကို သူ့မိန်းမ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြီး အတင်းဆွဲပါတယ်။ ဘာဘူကြီးရဲ့ သမီး အသက် ၂၀ လောက်လေးကလည်း အတော့်ကို ရိုင်းပျ စွာနဲ့ နင်က ငါ့အဖေ မယား အခု လိုက်ခဲ့ ဆိုပြီ ဆွဲပါတယ်။ အသက် ၂၀ အရွယ် ကောင်ကလေးကလည်း ဒါ ကျနော့် မိန်းမ ပါ မထည့်နိုင်ဘူး ဆိုပြီး အတင်းပြန်ဆွဲနေပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်များကို ကျနော် မေးမြန်းမှတ်တမ်း ယူထားလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်တို့မှာက တရားဥပဒေ စီရင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေ မရှိလို့ သက်ဆိုင်ရာ ကျောက်တံတား မြို့နယ် ရဲစခန်းဆီကို အဲဒီ လေးယောက် စလုံးကို ခေါ်သွားပြီး ဖြေရှင်းပေးဖို့ သတင်းပို့တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်က ပြောဆိုထားတဲ့ အကြောင်းတွေ ကျနော် မေးမြန်းထားပြီးဖြစ်တဲ့ အကြောင်း တရားဥပဒေ အရ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းကလေးကို အတင်း လက်ထပ်ယူထားခဲ့တဲ့ လူမျိုးခြား နဲ့ အခု လို အများသူငါ သွားလာနေတဲ့ မြန်မာပြည် ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမပေါ်မှာ ရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းစွာ ဆွဲလွဲဖမ်းဆီးနေခြင်းဟာ တရားဥပဒေ အရ ဘယ်လို အရေးယူလို့ ရနိုင်မလဲ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ လိုအပ်တဲ့ အရေးယူမှုမျိုး ဆက်လုပ်ပေးပါလို့ တိုင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
လူမျိုးရေး မငြိမ်မသက်မှုတွေ ဖြစ်နေတဲ့ အခုအချိန်မှာ ကျနော့် အနေနဲ့တော့ ဘာမှ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး ။ အိန္ဒိယလူမျိုး သားအဖ သူတို့ ဆွဲလွဲနေ ဆဲဆိုနေတဲ့ မှတ်တမ်းတွေတော့ကျနော့်တို့ အဖွဲ့က ရိုက်ကူးရယူထားလိုက်ပါတယ်။
သက်ဆိုင်တဲ့ လုံခြုံရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ (ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရဲ တပ်ဖွဲ့) က ဘယ်လို ဆက်လက် ဖြေရှင်းမလဲ ဆိုတာ ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Breaking News . ..
မိတ္တီလာမြို့ နယူးဝိန့်စိန် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် သုံးဦးအား
ဧပြီ 11ရက်နေ့က တစ်ဦးလျှင် ထောင်ဒဏ် 14 နှစ်
မြင့်မြင့်အေး 14 နှစ် ၊၊
ညီညီ(ခ)မင်းအောင် 14 နှစ်၊
ထွန်းထွန်းဦး(ခ)အာရှစ် 14 နှစ် မြင်းခြံထောင်သို့ ။
Creditးကို ၀ဏ္ဏစိုး
Posted From Kyaw Naing Win
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ တခါမှ မရှိဘူးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို မီးရှို့ဖို့ လက်မနှေးခဲ့သူများ
Wai Yan De Mo's photo.
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဂျပန်ခရီးစဉ်အတွင်း လူထုခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအား အထူးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးသည် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်သည်..
ဒီနေ့ RFA သတင်းဋ္ဌာနက ထုတ်လွှင့်သွားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာမိသားစုတွေ တွေ့ဆုံမယ့် ပွဲမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မြန်မာနယ်စပ်က ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူတွေ မတက်ရောက်ဖို့ တားမြစ်ခံရကြောင်း AFP သတင်းဋ္ဌာနကို ပြောဆိုတယ်လို့ ထုတ်လွှင့်သွားသလို. အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်ခွင့်အား ဗုဒ္ဓဘာသာ လူနည်းစုက ကန့်ကွက်သည်ဟု သွေးခွဲစကား ဆိုလိုက်သေးတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ကြိုဆိုရေးကော်မတီတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အစ္စလာမ်လာသာဝင်များနှင့် ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား စစ်စစ်တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ ဘာသာပေါင်းစုံ ပါဝင်ကြသည်..။
ဒါနဲ့ မစပ် ဘန်ကောက်သံရုံးရှေ့ ဗိုလ်ချုပ်ဓာတ်ပုံ မီးရှို့ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီနေ့ ဧရာဝတီ သတင်းဋ္ဌာနက သတင်းကို ဖတ်ကြည့်ရအောင်..
ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် မွတ်စလင်များနှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေ့ပြောင်းလာသော မွတ်စလင်များလည်း ပါဝင်ကြောင်း ယင်းဆန္ဒပြပွဲ၌ ဦးဆောင်သူတဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည့် Burmese Rohingya Association in Thailand (BRAT) ဥက္ကဋ္ဌ မောင်ကျော်နုက ပြောသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာရော၊ မြန်မာမွတ်စလင် ကိစ္စမှာရော နှုတ်ဆိတ်နေတဲ့ အတွက်ကြောင့်မို့လို့ မီးရှို့လိုက်တာပါ။ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းပုံ ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါလည်း တဖွဲ့လုံးရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ ရှို့တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပါလာတဲ့လူတွေထဲက ၃ ယောက်လောက်က လုပ်တာပါ” ဟု မောင်ကျော်နုက ပြောသည်။ (ဧရာဝတီသတင်းဋ္ဌာန)
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ တခါမှ မရှိဘူးတဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို မီးရှို့ဖို့ လက်မနှေးခဲ့သူများမှ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အတူတူ လှုပ်ရှား လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ဟု ဆိုလျှင် ယုံကြည်သင့်ပါ၏လော...။
ဗိုလ်ချုပ်၏သမီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံအား မီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်မရအောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူနည်းစုမှ ကန့်ကွက်ခဲ့သည်ဟု တဘက်သတ်သွေးခွဲစကား ပြောဆိုလာခဲ့မှုအပေါ် မည်သို့ သဘောထား သင့်ပါသနည်း..။
ယနေ့ ဂျပန်ခရီးစဉ် မစခင်မှာပင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးရှေ့မှ မီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့သူများ၏ လုပ်ရပ်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်။
ယနေ့ လူထုခေါင်းဆောင်၏ ဂျပန်ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား မဟုတ်သူများမှ အကြမ်းဖက် ဆန္ဒုပြခွင့်မပြုနိုင်အောင် လူထုခေါင်းဆောင်၏ လုံခြုံရေးအား အထူးကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးသည် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားပြည်သူအားလုံး၏ တာဝန်ဖြစ်သည်..
ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား မဟုတ်သူများမှ ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဓာတ်ပုံပါ တီရှပ်အား မီးရှို့ရန်ြ့ပင်ဆင်နေစဉ် မြင်တွေ့ရပုံ..
ဓာတ်ပုံ James Mint's
ဦး လည်းမပါ အရှင်လည်းမပါ။ လပွတ္တာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထံကြေးနန်းရောက်
ဖားကန့် ကျောက်စိမ်းမှော်တွင် သာမန်ပြည်သူများ ၀မ်းစာရှာရန် ခက်ခဲလာ
ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ မတိုင်မီ KIA ရဲ့ ခွင့်ပြုမှုအရ ကုမ္ပဏီပိုင်နေရာမှာ ကျောက်တူးနေတဲ့ သာမန်ပြည်သူများ။
သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ 12 ရက် 2013 ခုနှစ် သတင်း - ကချင်သတင်းဌာန
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းမှော်ဒေသရှိ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများတွင် အစိုးရစစ်တပ်များသာ နေရာယူ အခြေချ ထားလိုက်ခြင်းကြောင့် ဖားကန့်ပြည်သူများအတွက် တနိုင်တပိုင်ဝမ်းရေး ရှာဖွေစားသောက်ရန် အခက်အခဲဖြစ်လာကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံများကပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီလတွင်း အစိုးရစစ်တပ်မှ အင်အားတိုးချ လာသောကြောင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) နှင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ကာ KIA ဖက်မှ နောက်ဆုတ်ထားလိုက်ချိန်မှစ၍ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးနယ်မြေများတွင် အစိုးရကုမ္ပဏီများနေရာယူလာခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ထို့ပြင် ကုမ္ပဏီအတွင်း စွန့်ပစ်ကျောက်ရိုင်း (ရေမဆေး) ကောက်သူများနှင့် တနိုင်တပိုင်ကျောက်စိမ်းတူးဖော် နေသော ပြည်သူလူထုများကို အစိုးရစစ်တပ်မှ ခြောက်လန့်ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်နေပြီး ယခုချိန် ကုမ္ပဏီ အဆောက်အဦးများတွင်လည်း အစိုးရတပ်မှလုံခြုံရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအစိုးရတပ်များမှ ဖားကန့်ဒေသ ဂွေခါ (Gwi Hka)၊ ဆိုင်းတောင် (Seng Tawng)၊ ရှရော်ခ (Sharaw Hka)၊ မှော်ဝမ်း (Maw Wan)၊ မှောစီဆာ (Maw Si Sa)၊ လုံးခင်း (Lawng Hkang) စသည့် ကျောက်စိမ်းထွက်ရာကျေးရွာများအားလုံးတွင် နေရာယူ အခြေချ လိုက်ခြင်းကြောင့် ထိုမှော်တို့တွင် ရှာဖွေစားသောက်နေသော ပြည်သူများ အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများကပြောသည်။
မှော်ဝမ်းကလေးတွင်မူ ၄င်းနေရာတွင်ရှိသော အစိုးရတပ်ဖွဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးအား ဟင်းဖိုး၊ အရက်ဖိုးနှင့် ငွေများကို လစဉ် ပေးဆောင်နေရပြီး လုပ်ကွက်ပေးနေကြောင်း မှော်ဝမ်းကလေး ဒေသခံတစ်ဦးက KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“တခြားနေရာတွေမှာ လုံးဝလုပ်စားလို့မရတော့ဘူး။ ဒီကျနော်တို့မှော်ဝမ်းကလေး ကသေမှော်မှာက နည်းနည်း လုပ်စားလို့ရတယ်။ ဒီမှာလုပ်စား လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ အဲဒီမှာရှိတဲ့ ဗိုလ်ကြီးကို အရက်တွေ အသားတွေ ဟင်းတွေ လိုလေသေးမရှိ ၀ယ်ပေးထားရတယ်။ ငွေလဲ တစ်လကို ၄-၅ သိန်း လက်ဆောင်ပေးနေရတယ်။ ဟင်းတွေ အရက်တွေက နေ့တိုင်းဝယ်ပေးရတယ်။ အဲလိုမျိုးကြောင့် လုပ်စားလို့ရနေတာပေါ့။ အဲလိုမလုပ်ရင်မှော် ရပ်ဆိုင်းမယ်ဆိုပြီး အမျိုးမျိုး ခြောက်လန့်တယ်။ အခုလူတွေအများပိုင်း ဒီမှာလာတူးစား နေတာများတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေအားလုံးလည်း ဒီနေရာမှာ တူးစားနေတယ်” ဟုပြောသည်။
ဖားကန့်ဒေသသို့ ယခုလို နေရာယူလာသော စစ်တပ်သည် တပ်မ ၈၈ လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့များဖြစ်ပြီးဒီအခြေ အနေကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းမှော်ဒေသတွင် စစ်ရေးအားဖြင့် အစိုးရတပ်ဖွဲ့မှအပေါ်စီး ထားနိုင်ပြီဟု ပြောဆိုနိုင်ကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံများ က ဝေဖန် သုံးသပ်နေကြသည်။
ယခုချိန် နမ့်ယားနှင့် ဖားကန့် လမ်းတစ်လျှောက်တို့တွင်လည်း အစိုးရစစ်ယဉ်တန်းများ တရက်လျင် ၄ စီးဖြင့် အသွားအလာပြုလုပ်နေသောကြောင့် လူငယ်များကို အဖမ်းအဆီးပြုလုပ်မည်ကို စိုးရိမ်နေရကြောင်း ဖားကန့် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး ဆရာတစ်ဦးက ပြောသည်။
“စစ်သား၂၀ လောက်စီးတဲ့စစ်ကားက နေ့တိုင်း ၃၊ ၄ စီးပုံမှန် တက်လိုက် ဆင်းလိုက်လုပ်နေတယ်။လုံခြုံရေးယူ တာလားတော့ မသိဘူး။ အခုတော့ အစိုးရတပ်တွေ နေရာယူလိုက်ပြီဆိုတော့ အများပိုင်းက လူငယ်တွေအတွက် စိုးရိမ်ရတယ်။ ဟိုတလောကဆို လဖ္ဘက်ရည်ဆိုင်တွေက ဖမ်းယူပြီး သူတို့စစ်တပ်ကို ထည့်လိုက်တာတွေရှိပြီ အဲဒါကြောင့် ပြည်သူလူထုက သူတို့ဘယ်တော့ လာဖမ်းမယ်ဆိုတာကို ကြောက်နေရတယ်။ ခက်တော့ အရမ်း ခက်သွားတယ်။ အဲဒါကြောင့် လူငယ်တွေကိုလည်း ညမထွက်အောင်ပြောထားတယ်။ ထွက်လည်း မထွက်ကြတော့ဘူး” ဟု KNG ကချင် သတင်းဌာန သို့ပြောသည်။
အဆိုပါကျောက်စိမ်းကုမ္ပဏီများသည် ယခင် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)ကို အခွန်ပေးဆောင်ကာ ကျောက်တူးဖော်ခွင့် လုပ်ကွက်ရ ထားသော်လည်း ယမန်နှစ် မေလမှ စပြီး အစိုးရမှ ကုမ္မဏီများကိုရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ထုတ်လိုက်သောကြောင့် ရပ်လိုက်ရသေးသည်။
ထိုကုမ္ပဏီများရပ်ဆိုင်းထားစဉ် ၎င်းတို့၏ ကျန်ရှိနေသည့် ကျင်းဟောင်းများတွင် KIO က ပြည်သူများကို တနိုင်တပိုင် ဆက်လက်တူး ဖော်ခွင့် ပေးထားခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုချိန်တွင် ဖားကန့် ဒေသသို့ ဇန်န၀ါရီလမှ အစိုးရစစ်အင်အား ပြန်လည်တိုးချဲ့လာ၍ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာသောကြောင့် KIA ဖက်မှ လူထုကိုထိခိုက်မည်စိုးရိမ်၍ တပ်မဟာ (၂)၊ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၆) ကို နောက်ဆုတ်ပေးထားခဲ့ကြောင်း KIA ဖက်မှပြောသည်။
ထို တပ်ရင်း (၆)နေရာကို အစိုးရတပ်ကနေရာယူထားသည်ဟု ဒသခံများကပြောသည်။
အစိုးရအာဏာပိုင်များသည် ဇန်န၀ါရီလမှစ၍ ကျောက်တူးဖော်နေသူများကို မောင်းထုတ်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူလုထုများထဲမှ ၀မ်းရေးအတွက် ဆက်လက်ရှာဖွေ၍ မလိုက်နာသူများကို အစိုးရတပ်မှ ဖမ်းဆီး အရေးယူမှုများလည်းပြုလုပ်နေကြောင်းသိရသည်။
အစိုးရတပ်သည် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) ဌာနချုပ် လိုင်ဇာ အနီးတပ်စခန်းများအား ယမန်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစ၍ ပြင်းထန်စွာ တိုက်ပွဲများဆင်နွဲပြီး အဓိကကျသောစခန်းများကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။ ကျောက်စိမ်းထွက်ရှိရာ ဖားကန့်ဒေသ ဘက်တွင်လည်း အစိုးရတပ်က ထို့နည်းတူ အင်အားဖြည့် နေရာယူလာခြင်းဖြစ်သည်။
ကချင်လူထု၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတခုဖြစ်သော ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကို လွပ်လပ်စွာတူးဖော်ခွင့် မရှိသောကြောင့် နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးအခက်ခဲများ ပိုမိုရင်ဆိုင်လာရသည် ဟု ဒုက္ခသည်စောင့်ကြည့်သူများကလည်း ပြောဆိုသည်။
မြန်မာပြည်သူတွေကို အကဲစမ်းတဲ့အနေနဲ့ ....
Thuyaaung Thuyaaung Thuyaaung ဘင်္ဂါလီတို့ ဗျောင်လိမ်ဗျောင်စားကတော့ >>>> ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းပုံ မီးရှို့တဲ့အထဲ ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါလည်း တဖွဲ့လုံးရဲ့ သဘောဆန္ဒနဲ့ ရှို့တာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ <<<< ဆိုထားတယ်...... ဓါတ်ပုံမှာ မြင်ရတဲ့ မီးရှို့မယ့် အင်္ကျီဟာ ဒီဇိုင်းသေခြာဆွဲပီးမှ ပရင့်ထုတ်ရိုက်ထားတာပါ.... ခေါက်ရိုးတောင် မပျက်သေးပါ..... လူဝတ်ဖို့မဟုတ်ပဲ မီးရှို့ဖို့ တင်ကူးကြံရွယ်ထားတာ လွန်စွာမှ သိသာလှပါတယ်......
ဆန္ဒပြသူအများစုကို လိုက်လံကြည့်မိတော့လည်း အဆိုပါ အင်္ကျီမျိုး ၀တ်ဆင်ထားခြင်း မရှိတာ တွေ့ရပါတယ်.... ဒါဆိုရင်ဖြင့် မော်ကျော်နုရဲ့ မီးရှို့ရန်မှာ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဆိုတာ ဗျောင်လိမ်နေမှန်းသိသာပါတယ်..... ပြဿနာတက်လာတော့မှ သူတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောနေပေမယ့် ယင်းဆန္ဒပြပွဲ ဦးဆောင်သူတဦးအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည့် Burmese Rohingya Association in Thailand (BRAT) ဥက္ကဋ္ဌ မောင်ကျော်နု ဆိုတဲ့ သတင်းက ထွက်ထားပီးသား ဖြစ်သလို၊ ပုံပါအတိုင်း အင်္ကျီမီးရှို့ရန် ပြင်နေသူများနောက်မှာ မိုက်ခရိုဖုန်းကို ဟန်ပါပါနဲ့ ကိုင်နေတဲ့သူဟာ ဟန့်တားနေတဲ့ပုံစံ လုံးဝ မမြင်ရပါဘူး...... ပင်ကိုယ်ကပင် အလေးမထားတဲ့အတွက် ဂရုမစိုက်တာကို ဖော်ညွှန်းနေပါတယ်.....
ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ဟာ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ဖြစ်ပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါသွားလို့ ဖြေရှင်းချက်ထုတ်တာ ချက်ခြင်းထုတ်ရင် ရရဲ့သားနဲ့ ၁၀ ရက်နေ့မှ ထုတ်တယ်လို့ သိရပါတယ်..... သို့သော် ၁၀ ရက်နေ့မှ ထုတ်တယ်ဆိုသောသတင်းကို ဧရာဝတီ သတင်းဌာနမှာ တက်လာတာဟာ ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့ ၆ နာရီခွဲကျော်မှ ဖြစ်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်...... ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို အလေးထားတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေကို အကဲစမ်းတဲ့အနေနဲ့ တမင်လုပ်ပီးမှ ဘုန်းကြီးခေါင်းခေါက်ပီး ကန်တော့ဆိုသလို လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်ကို အတိုင်းသားမြင်အောင် ကြည့်နိုင်ပါတယ်.....
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/11/2013 1 အကြံပြုခြင်း
မန္တလေး တမ္မဝတီ ချီပါရပ်ကွက် မီးလောင်
၁၂-၄-၂၀၁၃ မနက် တစ်နာရီကျော်ကစတင်ပြီးလောင်ကျွမ်းတဲ့မီးဟာ ၃ နာရီအထိမီးညွန်.
မကျိုးသေးဘဲ အိမ်ခြေ ၁၅၀ ကျော် လောင်ကျွမ်း (ရိုက်ကူး-ဆူပါ)
တရုတ်ငှက်တုတ်ကွေး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ပျံ့ နှံ့...
တရားရုံးအတွင်း လမ်းပေ့ါ်တွင် ကိုမြင့်စိုးက တစ်နာရီခ...
နယူးဝိန့်စိန် ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် သုံးဦး ထောင်ဒဏ် 1...
မြန်မာ့သမိုင်းမှာ တခါမှ မရှိဘူးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို...
ဦး လည်းမပါ အရှင်လည်းမပါ။ လပွတ္တာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ေ...